Jiri Amamihe Ma Zere Captcha | Martech Zone
Ikekwe otu n’ime ahụmịhe ndị ọrụ kachasị njọ m nọgidere na-abanye na weebụ bụ Captcha nkà na ụzụ.
Captcha bụ mgbe emere ihe onyonyo site na ọnụọgụ, mkpụrụedemede, na mgbe ụfọdụ okwu ị ga - achọgharị ọzọ n'ọhịa. Nke a bụ igbochi ụdị mpempe akwụkwọ na-akpaghị aka site na ndị na-ekwu okwu spammers. Ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịkọwapụta koodu ahụ, ha enweghị ike ịnyefe ozi ụgha.
Ọ bụ teknụzụ na-egbochi mmadụ. Enweghị m ike ịgwa gị oge ole m ga-aga nyefere okwu ma ọ bụ zipu ozi na saịtị ụfọdụ ma mpaghara Captcha kwụsịrị m. Ọ na-akwụsị eruba ma kwụsị ahụmịhe onye ọrụ. Enweghị m ike ịnagide ya. N'oge ụfọdụ, m na-ada mbà ma kwụsị ịga na saịtị ma ọ bụ jiri ngwá ọrụ.
Ọ bụ kọmputa na-eme ya. Eziokwu ahụ na ọ bụ kọmputa na-eme na-agwa m na otu ụbọchị kọmputa ga-emebi ya. O bu nani oge.
ọ bụ umengwụ. Kama idozi nsogbu ahụ, ọ na - eme ka onye ọrụ rụọ ọrụ gburugburu ya.
Appzọ Ka Mma
Otu di na nwunye jụrụ m ihe kpatara na anaghị m eji Captcha eme ihe mgbe m dere ngwa mgbakwunye Comment Form m. Ejighị m ya n'ihi na achọrọ m ịme ahụmịhe ahụ mma, adịghị njọ, ka ị na-ezere ndị spammers na-ekwu. Naanị obere amamihe, ụlọ ọrụ ngwanrọ nwere ike ime ka nsogbu ndị a bụrụ ihe ọchị, ọ bụghị nkwụsị.
Ihe ịma aka m na m kọntaktị page bụ ezigbo mfe, “ikpeazụ okwu m blog aha”. Mana ọ na - eme ka onye ahụ chọọ anya nke abụọ na ikekwe ọbụna chuckle, na ha ga - abanye “blog”. Ọ dị mma ma dị mfe. Enweghị mkpụrụ edemede, iwe iwe, njikọta nke mkpụrụedemede na nọmba. Naanị ajụjụ dị mfe nke enweghị ike ịza kọmputa - naanị onye na - agụ ya.
Facebook ugbu a na-eji Captcha
Companylọ ọrụ kachasị ọhụrụ dabara na teknụzụ ịke Captcha bụ Facebook. Ọbụghị naanị na ọ bụ oke anya, ị nwere ike ị gụ agụ ihe ahụ. Facebook bụ ezigbo kpakpando na-emepe emepe ụfọdụ ngwaọrụ dị jụụ na njikọta na saịtị ha… ha ga-eji teknụzụ nzuzu a? Ihe zuru ezu na ụdị ahụ na ndị ọzọ na-ere ya.
Mightfọdụ nwere ike ịrụ ụka na "ọ na-arụ ọrụ". Ọ na-arụ ọrụ na nkwanye ùgwù na ọ na-ewepu nsogbu ahụ na weebụsaịtị ma tinye ya na onye ọrụ. Nke a bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha ma nwee ụzọ ka mma! C'mon Facebook… na-a ohere, echepụta ihe! Nwee ihe.
Jul 14, 2007 na 9:10 PM
Otu ihe ngosiputa ohuru nke yiri captcha bu HumanAuth (na KittenAuth). O dikwa ka echiche “last word in my blog title”. Mmadu aghaghi iguta ihe omuma ma gosiputa na ha ghotara ihe omuma. Ọ dịghị kọmputa nwere ike ime nke ahụ, ma. Mana ọ bụrụ na ị na-ege ndị AI ntị, ha ga-, n'oge na-adịghị anya! Ọ dị nso na nkuku, n'ezie!
Ọ bụrụ na HumanAuth ma ọ bụ ihe “ọkọlọtọ” nke kọmputa na-enweghị ike ime ga - ejide ma banye ebe niile, ọ ga - ebelata nkwụsị ị na - ekwu.
MA, ị ka ga-akpachara anya na mmejuputa ya. Ihe atụ mmadụ nke m gara wee lee anya ọzọ nwere ntụpọ! Oge ịpịrị aka nri onyonyo 3, ọ gbanwere bọtịnụ iji mee ka ị mara na ị nwetara ya nke ọma. Nke ahụ dị mma, mana ọ na-enye gị clicks na-akparaghị ókè, yabụ algorithm dị mfe ịmegharị ihe nwere ike ịchọpụta onyonyo atọ ahụ.
Echiche gị dị mfe ma dịkwa mfe na-apụtakarị na ọ nwere obere ihe nwere ike ịgahie.
Jul 15, 2007 na 6: 57 AM
Amaghị m banyere HumanAuth na KittenAuth… Aga m eleba anya na teknụzụ ndị a!
Sep 4, 2007 na 9:33 PM
Ọ naghị agwa gị na ị nwere ya ““ ziri ezi ”ọ na-agwa gị naanị na ị họrọla onyonyo atọ.
Thomas Hansen na-bụ mmadu
Jul 15, 2007 na 5: 40 AM
Mmasị echiche, ọ bụ ezie na ejighị m n'aka na ọ kwesịrị ya blọgụ nke ya item
Ma gịnị ka mmadụ anaghị eme maka ntakịrị nlebara anya……
Agbanyeghị, saịtị anyị (http://ajaxwidgets.com) enweghị captcha maka usoro blọọgụ anyị. Na eziokwu bụ na 99.99% niile spam blọọgụ na-agọnarị site na eziokwu ahụ dị mfe na anyị anaghị ekwe ka HTML…!
Na mgbakwunye anyị na-eji “njikọ condom” maka URL ubi nke na-ewepụkwa ọtụtụ spam. Ọ bụghị n'ezie niile na ike 🙂
Jul 15, 2007 na 6: 50 AM
Ebumnobi m abụghị anya, Thomas. N'ezie ọ bụ ịdọrọ uche gaa na teknụzụ nke 'nnabata' nke kachasị ma ọ bụghị enyi na enyi.
Ihe atụ gị nke otu ị si emeso ya bụ ihe m kwuru, enwere ụzọ dị mkpirikpi nke isi dozie nsogbu ahụ.
Daalụ, Thomas! M hụrụ n'anya wijetị, n'ihi ya, m ga-enyocha saịtị gị!
Jul 15, 2007 na 6: 45 AM
Fail na-ekwupụtaghị captcha's ndị na-abụghị ndị ike gwụrụ na ezi ederede ederede gbagọrọ agbagọ.
A captcha nwere ike ịbụ ọtụtụ ihe, ederede ederede, ajụjụ na azịza, nke nwere ike ịchọta (nke kachasị mma) ma ndị a dị ngwa ngwa iji ma nwee nghọta karịa na ịnwa ịchọpụta ma ọ bụ o ma ọ bụ 0.
Ekwenyere m na gị, m kpọkwara ha asị, mana post gị enweghị ike ikpuchi oke isiokwu ahụ, ị ​​nyeghịkwa echiche ọ bụla gbasara otu esi edozi ya.
Jul 15, 2007 na 6: 54 AM
Ekwenyere m - Abughi m ụzọ kacha mma… nke ahụ bụ ihe m na-akpọ bụ ụlọ ọrụ nwere nnukwu akụ na ndị ọkachamara ahụmịhe onye ọrụ. Ihe mkpali m maka ide post ahụ bụ mgbe m hụrụ Facebook ka ọ na-eji teknụzụ a.
Amaghị m na teknụzụ Captcha mechiri na mpụga nke mfe font graphic nke onye ọrụ ga-edo onwe ya n'okpuru. Ọ bụrụ na teknụzụ Captcha na-agbasa akara ụkwụ ha n'ime ajụjụ ịma aka na azịza enwere ike ịme iji bulie, ọ bụghị iweda ala, ahụmịhe onye ọrụ, m niile maka ha!
Jul 15, 2007 na 7: 25 AM
Jiri aha na-agbanwe agbanwe. Ozugbo onye ọrụ bịara na peeji ahụ setịpụrụ kuki kuki nke nwere nọmba na-enweghị usoro. Nyezie mkpado “ntinye” gi aha = ”ikwu __ [aha]”, yabụ otu maka ubi gị ndị ọzọ.
Mgbe ahụ tọgharịa nọmba mgbe ọ bụla mmadụ gara na ibe.
Nke ahụ ga - agba mbọ hụ na mmadụ ịga na peeji a: obere oge.
Jul 15, 2007 na 7: 48 AM
Ekwenyere m kpamkpam gị. CAPTCHA si bụ ihe mgbu na…
Agbanyeghị, ọ dị mfe n'ezie ide CAPTCHA a na-adịghị ahụ anya nke na-eme aghụghọ. E nwere ụzọ dị iche iche esi eme ya.
Jul 15, 2007 na 8: 57 AM
Captcha's nwere ike iwe. Morefọdụ karịa ndị ọzọ. Ahụla m ụfọdụ ndị na - agaghị ekwe omume ịgụ (nke mebiri nzube ahụ). M na-eji ụdị "ọjọọ" nke Captcha ị kọwara na ọrụ ole na ole. Agbanyeghị, m na-eme ka ọ dị mfe ịgụ ya ka mmadụ ghara ịmịkọrọ ụbụrụ ya ka ọ ghọta ya. Ọzọkwa, naanị m "captcha" mgbe onye ọrụ na-edebanye aha, ọ bụghị oge ọ bụla ha na-enye ntinye aka na saịtị. Ọ bụghị usoro zuru oke, mana m na-ewere ya dị ka ihe na-akpata iwe iwe mmadụ.
N'ebe ahụ ka ị na-aga, anyị nwere ike ịmalite ịlele Captcha na ha "HAF" (Ihe kpatara iwe mmadụ), Spammer Annoyance Factor, wdg.
Jul 15, 2007 na 9: 13 AM
Captcha na HAF. Nke ahụ masịrị m!
Jul 15, 2007 na 12:19 PM
Achọghị m ileda ngwa mgbakwunye gị anya mana enwere ụzọ ka mma iji nyocha spam na wordpress. Enwere ngwa mgbakwunye dị ịtụnanya nke m na - eji SpamKarma ma jiri ụdị ọrụ ịkọwapụta iji chọpụta ma post a ọ bụrụ mmadụ ma ọ bụ na ọ bụ spam. Anọ m na-eji ya ihe dị ka 1 1/2 ma ọ bụ 2 afọ ugbu a na ozugbo ọ gosipụtara okwu mmadụ dị ka spam na mgbe ọ na-ejighị n'aka na ọ jụrụ onye ahụ ka ọ dejupụta captcha wee hapụ okwu ahụ. Ọ na - ejide ọtụtụ narị okwu spam kwa izu n'agbanyeghị na anaghị ekwe ka ọ bụla gafee.
Akpọkwara m captchas asị. Ọ bụrụ na m ga-ede captcha, m ga-eme ya dị ka http://www.hotcaptcha.com/ ebe ọ bụ na ị na-ahụta ndị mmadụ mara mma ma ọ bụ ụmụ anụmanụ na-acha odo odo ma ọ bụ ihe ọ bụla n'ime usoro ihe oyiyi dị obere maka ụmụ mmadụ na ihe siri ike maka edemede akpaghị aka.
Jul 15, 2007 na 12:28 PM
Ejighi m SpamKarma mana anuru m ya. M na-eji Àgwà Ọjọọ ma enwere m ike ịnagide 10% nke spam na-aza ajụjụ m nwere na mbụ.
Aga m enyocha Hot Captcha - ụda yiri nke m chọrọ ịhụ.
Jul 15, 2007 na 12:23 PM
Ozi a abaghị uru. Ihe ngwọta gị adịghị atụ. Enwere ike ịhazi “bot” ngwa ngwa iji zere usoro nchekwa gị site na dejupụta “blog” oge ọ bụla. Ihe ngwọta ahụ nwere ọtụtụ ajụjụ - ọtụtụ ajụjụ ị chọrọ ide. Kedụ ka facebook, ticketmaster, ma ọ bụ yahoo ga-esi tinye ụdị azịza a?
Nke a bụ naanị ihe nzuzu iji nweta nlebara anya na ịkwalite mgbasa ozi mgbasa ozi gị. Ga-agbasi mbọ ike “ịsị” blog a. M ga-amalite site na ọdịnaya kwesịrị ịgụ.
Jul 15, 2007 na 12:34 PM
Chei, Mat. Mmadu na-ada obere nkpu taa.
Dị ka a ga - asị na ịgaghị agụ m. Ekwughi m na azịza m ga-aba ụba ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị a agaghị eji ya. M mere kwuo na m ga-achọ ịhụ ụlọ ọrụ ụfọdụ (dịka Facebook) iwepụta ụzọ dị mma karịa. Ihe mgbakwunye m na-enye gị ohere ịgbanwe ajụjụ ịma aka ma zaa oge ọ bụla ịchọrọ - enweghị bot ga-esochi ya. Ruo ugbu a, enweghị m SPAM na ibe kọntaktị m site na ngwọta a.
Otu ihe atụ: Ikekwe Facebook nwere ike irite uru site na iji mgbasa ozi na ibe ahụ ma jụọ "Whonye bụ mgbasa ozi na ibe a?". Ihe ọ bụla dị mma karịa ịpịa ọnụ ọgụgụ na mkpụrụedemede - ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịgụ ha.
Cheers! Jide n'aka na ịdenye aha! hehe
Jul 16, 2007 na 9: 12 AM
The “Onye mgbasa ozi dị na peeji a” bụ ihe na-akpali echiche. Ahụla m ya tupu emee ya na weebụsaịtị a na-akpọ Moola.com. Otú ọ dị, ha na-eji ya eme ihe kpọmkwem dị ka ụzọ isi dọrọ uche gaa na ndị na-akpọsa ha (dị ka interstitial) karịa usoro mgbochi spam.
Offọdụ n'ime ha ga-amanye gị ka ịlele vidiyo vidiyo nke 20 ma wee zaa ajụjụ dị ka "Kedu ụlọ ọrụ maka mgbasa ozi a?" Ọ bụ ezie na abụghị m onye ofufe nke usoro ahụ (akpọghị m asị ichere), ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ihe ihe dị ka nke ahụ na-eme na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Jul 15, 2007 na 4:30 PM
Ewezuga ihe mkpasu iwe, nke buru ibu, CAPTCHAs enweghị ike ịnweta onye ọ bụla nwere obere ọhụụ zuru oke.
Cheedị CAPTCHA nke ị na-esiri ike ịgụ ma hapụ onye ọhụụ na-adịghị ahụ ka ọ laa. O siri ike? Fọrọ nke nta ka-agaghị ekwe omume.
Kedu maka onye na-enweghị ọhụụ ma ọlị, na-eji ntanetị agụ ma ọ bụ teknụzụ sọfụ weebụ. Ewere CAPTCHA ka programmụ a wee ghara ịgụ ya. N'okwu a, onye ọrụ nkwarụ agaghị enwekwa.
E nwere ole na ole CAPTCHAs, ndị na-agụnye olu CAPTCHA maka ndị na-enweghị ike ịhụ bụ ihe atụ, mana nchegbu ndị agbakwunyere agbakwunyere na-eme ka ọ bụrụ teknụzụ nke m na-agaghị atụle itinye n'ọrụ. Tie ndị spamm ahụ ụzọ ọzọ, emela ka ezigbo ndị ọrụ gị kwụọ ụgwọ (yana ihe kpatara m ji eji mgbakwunye dofollow).
Jul 15, 2007 na 8:43 PM
Captchas adịghị njọ. Bad captchas dị njọ. Ọ bụrụ na ha siri ike ịchọpụta na ị gaghị agụ ya, mgbe ahụ nke ahụ dị njọ.
Agbanyeghị, echere m na azịza kachasị mma bụ ajụjụ gbasara mgbakọ na mwepụ, mgbanwe atọ:
Emere ya ka mgbakọ na mwepụ dị mfe, ị nwere ike ịchọpụta ihe azịza ya sitere na edemede edemede kama ịdị nfe.
Jul 16, 2007 na 9: 13 AM
Otu idiocha ngwọta m okosobode ebe bụ a igbe kpọrọ “M a na spammer”, na bịara uncheck na ndabara. N'eziokwu, ọ bara uru na ọnọdụ nke igbochi ntinye aka na akpaghị aka karịa na nkwupụta (dịka okwu blog anaghị enwekarị igbe nlele chọrọ nyocha).
N'ezie n'ikpeazụ ọ bụ naanị oge tupu AIs emebi nke ahụ. Mana echeghị m na e nwere ihe ngwọta zuru oke karịa robot agaghị emebi, n'ihi ya, nke a dị mma nke na anaghị akpaghasị ahụmịhe onye ọrụ ọ bụla (belụsọ, n'ezie, ị ga-ewere onwe gị onye spammer…)
Jul 16, 2007 na 9: 18 AM
Gịnị bụ na ihe ọjọọ kwuru banyere nke a ịbụ ihe "ntị na-eche" post? Kemgbe ole mgbe ọ bụ ihe ọjọọ ịgbakwunye ụda olu gị na mkparịta ụka ahụ. Heck, na ihe 17 kwuru ugbua, o doro anya na isiokwu ndị mmadụ nwere mmasị na ya.
E wezụga nke ahụ, ọ bụrụ na nke a bụ isiokwu na-adọta mmasị ndị mmadụ, gịnị kpatara ị ga - agaghị achọ ịde blọgụ gbasara ya?
Jul 17, 2007 na 11: 34 AM
Kedu ka nke ahụ abụghị CAPTCHA?
N'eziokwu, ọ bụghị akwụkwọ ozi mang a na-ahụkarị n'ụdị esere arụ, mana ọ bụ ihe na-agba mbọ ịkọwa kọmputa na mmadụ iche.
Mee 20, 2008 na 10: 55 AM
Ee, ekwenyere m na captchas bụ obere ihe mgbakasị ahụ, ọ dịkwa nwute na m ghọtara na ha bụ ihe mgbochi maka ndị ọrụ nwere nkwarụ, mana n'oge na-adịbeghị anya
raved banyere otu esi ekele maka usoro abụọ nke usoro reCaptcha, na ọ na-egbochi spam (ọ bụ ezie na ọ bụghị 100% nke ọma, dị ka ị rụtụrụ aka) ka m na-enyere aka ịkọwapụta akwụkwọ, ma m ka bụ onye ofufe.
Enweghi ike ịgbagha mmetụta ha na ahụmịhe onye ọrụ, mana ị ga-ekweta na iji obere mbọ sitere n'aka onye ọ bụla n'ime nnukwu ọdọ mmadụ mee ihe ọbụlagodi kọmpụta nwere ọgụgụ isi enweghị ike (gụọ ederede mangled nke na-emegide iesghọta Ọdịdị Ahụhụ) bụ ezigbo mara azịza.
Agbanyeghị na-ekwukarị, ee, m niile maka iji ihe okike karịa koodu mgbe enwere m ike.
Feb 15, 2009 na 6:59 PM
Ọmarịcha nkenke post. Mu onwe m, ekwenyeghi na ire oku banyere ebumnuche nke post gị. Karịsịa ebe ndị ọzọ na-egosi enweghị gị inye "azịza" ma ọ bụ "ọzọ," nke m nwere ike youụọ iyi na ị mere site na ịkwu ụdị ngwa mgbakwunye na mkparịta ụka nke ibe ịkpọtụrụ gị (ma ọ bụ na atụfuru m ihe ọ bụla? 😉 Echere m na ọtụtụ mmadụ na-etolite echiche (ma kesaa ya) na-enweghị inye nsogbu ịgụ ọbụna obere ederede, dị ka nke a, tupu ha amalite ịlụ ọgụ (nke na-arụ ọrụ na-esote ihe ọ bụla)
Nke a bụ arụmụka na-adọrọ mmasị na, n'agbanyeghị ma enwetara ihe ngwọta, kwesịrị ide banyere ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ọ bụ blog gị, na - na nke a bụ ihe na-ewute m karịa banyere ụfọdụ n'ime ihe ndị a na - ekwu - ebe ọ bụ na ole ịde blọgụ ghọrọ ọrụ ọha na eze? I choo ide ihe, dee maka ya. Onye obula na achoghi igu akwukwo nwere oghere ighi agu ya. Ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ ego, nke a ga-abụ akụkọ dị iche, mana, ọ bụrụ na m ziri ezi, weblogs sitere na ọchịchọ nke oke biputere ihe ọ bụla na / ma ọ bụ ihe ọ bụla na-aba n'isi ha ma wepụta ya maka ngosipụta ọha, ma ọ bụ iji mee ka ọ dịkwuo mfe iso ndị enyi kerịta. Imirikiti ọdịnaya blọọgụ enweghị ike ịnweta ọhaneze ma ọ bụ ọbụna na-atọ ụtọ nye ndị na-etinyeghị aka.
Aghaghị m ịchị ọchị mgbe m gụrụ banyere iji post a iji kwado ego mgbasa ozi gị. Ikekwe (echekwara m) ahụmịhe gị dị mma karịa nke m, mana - belụsọ na ị na - ede blọgụ iji kwalite ngwaahịa - ị nwere ike ide banyere captcha ma ọ bụ ị nwere ike ide banyere etu nri nkịta na - esi esi ísì ụtọ yana usoro mgbasa ozi gị kwụọ ụgwọ na ọnọdụ ọ na-atụghị anya ya na ọnọdụ ọ bụla 😉
N'ikwu ya, ọ bụrụ na ndị na-eme CAPTCHA na-agụ ihe, daalụ maka itinye ụda ahụ! Black blackground with a tumultuously wavy white grid foreground n’elu nke ghostly ọcha (na oké agbagọ) leta na-gwa (mgbe ụfọdụ na nsọtụ nke foto) bụ ihe atụ zuru oke nke ọnọdụ na mmadụ nwere ezi uche ọhụụ ga-esiri ike ịkọwa, mana a omume ga-eleghị anya mfe dozie ihe karịrị oge.
Naanị mkpụrụ ego m,
Ekele dịrị gị,